အချို့ကားဂိမ်းများသင်ဖြတ်ပြီးလာစေခြင်းငှါအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူအပြင်အဆောက်အဦများ၊ကျနော်တို့မျှော်လင့်တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်သွားကြောင်း! အဆိုပါအဖွဲ့သည်ဒီမှာဆောဘုရင်ယိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်အပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်နှင့်ညဉ့်လုံးဒီဂိမ်းအပေါ်များအတွက်ပိုကောင်းအစိတ်အပိုင်း၏အနှစ်နှစ်:ဒါကြောင့်ပျော်မွေ့! အခုချက်ချင်း၊သင်နိုင်မှတက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်မှတ်ပုံတင်ဒီဂိမ်းထဲမှာဘာမှမပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ–ရိုးရိုးများကိုတရားဝင်အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့သင်သွားသောင့်! ဤသည်အမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့ဂိမ်းအခွင့်အဘို့အယောက်ျားတွေရှိသည်ဖြစ်သွားဘယ်သူတစ်ဦးကိုယ်ဝန် fetish:ပါလိမ့်မယ်သင်ဖို့ကသက်သေပြကဲ့သို့ကောင်းစွာ!, အဇိုင်းစည်းမျဉ်းဒီနေရာမှာတော်တော်လေးမင်းအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့:အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးခြင်းလူအဖို့လက်လှမ်းတဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း fetish ပုံစံခရီးနှင့်သူတို့လာလိမ့်မယ်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ(ဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ!)။ ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဒီအကြောင်းအပြည့်အဝစုံနှင့်ချောလွန်းဂိမ်း–အဓိပ္ပါယ်မှအသင်းမှာပါ TKS! နေစဉ်ကျနော်တို့နေဆဲအစီအစဉ်အဖါအသေးစားကိစ္စရပ်များ၊အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ဖို့ခေါ်ဒီစီမံကိန်းပြီးစီးပြီးသွားပေးအခမဲ့အဘို့။, သဘာဝကျကျ၊သင်ရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးတူ microtransactions ကိုဝယ်ယူ၊ဒါပေမယ့်မလိုအပ်အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပဲဖြစ်ကြာမြင့်စွာသင်ကြိုးစားနှင့်ပျော်မွေ့! ဒီတစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား? ထိုအခါမှဆင်းရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခုအချိန်မှာအကောင့်တစ်ခုဖန်တီး၊ရီစရာ!
သင်သည်မပြုလျှင်အများကြီးအဘို့အစောင့်ရှောက်တိုဂိမ်းများ၊ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့အချစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမှုအရာဒီမှာ GMP ရတော်တော်ရှုပ်ထွေးအစောပိုင်းအပေါ်။ စတင်ထံမှပြီးမှ၊ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူအကြာ ၁၅ နာရီရတစ္ခုလံုးဂိမ္း–မင့်အပါအဝင်အားလုံးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဘေးထွက်ဆိုးဖှေနေနိုင်ဘူး။ ထို့အတူအကြောင်းအရာဖြန့်ချိစီစဉ်ကျော်ကိုလာမယ့် ၁၂ လအတွင်း၊သင်ပြန်လာနိုင်မည်သည့်အချက်မှာအနာဂတ်အတွက်နှင့်ပိုရှိသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလိင်အရေးယူဂိမ်းသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။, မသွားပါစေပါဘူးမည်သူမဆိုသောသင်တို့၌ပြောပြနေရာမှာအသင်းကိုအမကျူးလွန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုမှကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ္းချမ်းသာ:ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်အတွက်ကိုယ်ဝန်နယ်ပယ်အာကာသကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသောဤသူကား ၁၀၀%အကောင်းဆုံးဂိမ်းပတ်ပတ်လည်များအတွက်သူမည်သူမဆိုချစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပန္လာေ။ ဘာဒါအေးမြသည်အကြောင်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်အရေးယူနိုင်သသက္သာႏိုင္ပါ၏အရှိန်အဟုန်လက်တွေ့အရာအားလုံးကို။ တစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား? ထိုအခါကုန်အံ့ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောဆိုနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုလုပ်၏အများဆုံးရရန်ငါ့ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အဖြစ်သုက်စွဲလမ်း!
အများကြီး NPCs အ impregnate
ခဏတစ်အရေအမျိုးသမီးများသင်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်၌အကြှနျုပျကိုကကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးသားအခေါက်၊အစိတ်အပိုင်းများ၏တာဝန်ရတဲ့ broads ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှဆင်းလာ။ ဘာသာျပန္ထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ားအကြာချက်ပြုတ်ရန်အချိန်သိပ်လျှင်၊ဒါကြောင့်သင်တို့အလိုအရဤ broads တစ်ပြည်နယ်အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊သင်ရှိသည်ဖို့တာပေါ့စုပ်ဖို့သူတို့ကိုအပြည့်အဝပည္ဆိုင္ရာအခါတိုင်းသင်လုပ်နိုင်။ မှတ်ချက်ထဲမှာ GMP၊ငါတို့သည်လည်းများ၏အရေအသေးစား-ဂိမ်းများထွက်ကြိုးစားနိုငျအပေါ်သင်ကူညီသင့်ရဲ့ impregnation။ ဤအတိုးမြှင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့မျိုးပွား၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပေးများအတွက်စွမ်းရည်ကိုသင်တွေ့မြင်သည့်အခါသူတို့ခံရဖို့တာပေါ့ ovulating။ အကြောင်းပြောဆို-အနက်၊မှန်သော?, ရှိပါတယ်ကိုလည်းအထူး gimmicks နှင့်အရာဝတ္ထုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြီး cumshot၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တိုးမြှင့်တန်ခိုးနှင့်နက်ရ၏ဝန်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်သည့်အခါကျနော်တို့အကြောင်းပြောမယ့်အမှန်တကယ်အပေါ်ကိုငါတို့လက်ထထူးအရာတစ်ခုခုကဒီမှာ။ ဒါဟာသိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှမဖွင့်ရ bandwagon အပေါ်ဖြစ်စေ:ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ရှုသည့်အခါဖိုရမ်များ၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ဖွဲ့လုံးတွင်အိမ်ရှင်များ၏အသေးစိတ်သတင်းအချက်ကိုယ်ဝန်နဲ့သုက်။ ဤသည်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းစေချင်ပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ–အမှုကိုအကြောင်းကျွန်တော်လုံးဝ!, နေစဉ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တစ်ဦးစွန့်ပစ် jizz မဟုတ်လျှင်သင်ရတဲ့င်အလိုးယင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ပျော်ရွှင်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့? ထိုအခါသွားသည်အခြားနေရာမှာနှင့်အခြားညစ်ညမ်းဂိမ်း! ဒါဟာအပျနှံထားသောအာကာသအကြော XXX စွဲချင်သော creampie စ္ခါအပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်နှင့်ညဉ့်လုံး။
ရှိမရှိမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ရှာတစ်ခုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာ၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြေးဖို့ငါ့ကိုအရယူပါကိုယ်ဝန်မရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ မည်သို့လာ၊သင်မေး? ကောင်းစွာ–အသင်းရှိပါတယ်သေချာကြောင်းမည်သူမဆိုဤဂိမ်းကစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့တစ်ဦးရှိသည်။ ကတည်းကအားလုံးနီးပါးဖုန်းနိုင်ပြေး Chrome၊မြေခွေး၊ရှုသို့မဟုတ်အော်၊သင်ခံရဖို့ဖြစ်ကောင်း။ ဒါဟာမပြည့်စုံပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်၊သင်မူကား၊သူတို့သည်အလွန်အစောပိုင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်ဖြင့်တည်ဆောက်ပုံများနှင့်အရွတ်။, ဒါကပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျနော်တို့သေချာစေရန်သင်အလွန်ကြီးစွာသောညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ။ သင့်၊မှန်သော? ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ယုံကြည်ဒါကြောင့်! အခုတော့ရှေ့ဆက်ရွေ့လျား၊အကြှနျုပျတို့ပွုပါချင်မှသိရၽြန္ုပ္၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်မည်လည်းတစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ညာဂ်ာနယ္၊ဒါပေမဲ့ဒီလုံးဝကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးသင်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဲဒီတော့လူတွေမရှိဘဲအလွန်ကြီးစွာသောအင်တာနက်ကွန်ဆဲပျော်မွေ့ရတဲ့ပန္လာေကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း။ အဲဒီပြူးဝမ်းထဲသွားကြသည်မဟုတ်ကြည့်ဖို့ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဆိုရင်နေလုပ္ပါ၊မှန်သော?, ကျနော်တို့နေဆဲလအနည်းငယ်အကွာမှထုတ်ဝေဒီအသစ်၏အပိုင်းအစနည္းပညာ၊ငါတို့မူကားသင်တို့၌အာမခံသောကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်တွန်းအဖြစ်အမြန်ဆုံးရနိုင်အွန်လိုင်းက။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ၊မိတ်ဆွေ–ဆိုတာဒါကတောရိုင်းလိုနေရာ!
ကျေးဇူးသင်တို့အဘို့ဤမျှလောက်အချိန်ယူသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ၏ထွက်အကြောင်းကိုအားလုံးဖတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်း။ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြိုးစားရဖို့ကဧရာလက်ရှိတွင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနေလိမ့်မယ်ဆိုတာခံစားအချို့သောအလာညမ်းအရေးယူအတွက်အချိန်မှာအားလုံး။ ပဲသတိရတဲ့အခါသင်ရချင်အပေါ်အချို့နှင့်အတူကြယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောလိင်ဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ဤသည်သာအဂိမ်းထဲမှာသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း။ တက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ခံအခုအချိန်မှာ–ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်! အများကြီးကိုချစ်ပြီးသင်တို့ကိုတွေ့မြင်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်။